आयरलेन्ड र नेपालको टी ट्वान्टी क्रिकेटको लाईभ स्कोर अपडेट ! सन्दिपले लिए १ विकेट – सुदूरखबर डटकम
आयरलेन्ड र नेपालको टी ट्वान्टी क्रिकेटको लाईभ स्कोर अपडेट ! सन्दिपले लिए १ विकेट
ओमानमा चलिरहेको पाँच देश सम्मिलित टी-२० क्रिकेटमा नेपालले अहिले आयरल्याण्डसँग खेल्दैछ ।
खेल नेपाली समय अनुसार बिहान सवा एघार बजे सुरु हुनेछ । आफ्नो पहिलो खेलमा हङ्कङलाई र दोश्रो खेलमा नेदल्याण्ड्सलाई समान चार विकेटले हराएको नेपालले आज टेष्ट मान्यता प्राप्त टोली आयरल्याण्डसँग खेल्न लागेको हो ।
नेपालले, दुई खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेका पवन सर्राफ र रोहित पौडेललाई आज परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ । आयरल्याण्डले प्रतियोगिताका तीनमध्ये दुई खेलमा जित हात पारेको छ ।
हेर्नुहोस लाईभ स्कोर ।